Maxaad ku samayn lahayd Dubai? | Shaqooyinka - Xannaanada - Ugaarsiga Xirfadaha Safarrada ee Looga Dalbo Dubai
Waxaa laga yaabaa 25, 2019
Maxaad sameyneysaa marka aad shaqo raadinayso Dubai?
Well, intaad shaqo ka raadinayso Dubai. Waxaa jira dhowr waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan dalban. Dabcan, waxaan wada ognahay inaysan ahayn hawl fudud oo la qaban karo. Qodobka ugu adag ayaa ah si aad maskaxdaada ugu toosi karto barta. Waligaa hoos ha u dhicin oo maskaxdaada ha u dhigin guul. Daacad noqo way fududahay in la qoro. Si aad u adag ayaa loo maareeyaa.
Intaad joogi doontid shaqo ka raadinta Bariga Dhexe, waxaa jira dhowr waxyaabood oo ay tahay inaad iska ilaaliso. Gaar ahaan haddii aan ka hadlayno shaqo raadinta Dubai iyo Abu Dhabi.
Awoodda Ka Fikirka Ka Faa'iidaysto Awoodda Lagu Arko!
Badanaa Raadinta Shaqada Guud waa ka fogaataa
1. Macluumaad Dheeraad ah ee Resume
Waayo-aragnimada shaqadu hubaal ma shaqeyso ku qor buuga manhajka haddii aad qori waayo-aragnimo sax ah oo lagama maarmaan u ah shaqo-doone. Midda ugufiican waa kan muujinaya waxa aad tahay inaad siiso loo-shaqeeyaha mustaqbalka ee Bariga Dhexe.
CV-gaagu waa inuu noqdaa waxa ku saabsan waad siin kartaa shaqaaleeyaha ama maamulaha HR. Maxaa yeelay tani waa waxa kaliya ee muhiim u ah loo shaqeeyaha. Waxa ugu xun ee ku saabsan CV-gaagu waa inaad ku qorto waxaad rabto shaqo-bixin. Hubso inaad ku dartid kaliya khibrad qiimo leh. Tusaale ahaan, uma baahnid inaad ku darto sanadaha 34 ee taariikhda shaqo maadaama aad bilaawday iibinta sigaar kasta $ $ $ 90 $ bulshada maxaliga ah. Looma baahna in lagu daro taariikhda qalin-jabintaada dugsiga sare, ama waxa aad jeceshahay in aad sameyso waqtigaaga fasaxa.
Yaa yahay tartanka ugu weyn ee aad leedahay?
Kumanaan kun oo qof ayaa CV u diray diraya Dubai. Marka, guud ahaan hadlidda, waxaad haysataa oo keliya qiyaastii 3 ilbiriqsi si aad aragti uga muujiso shaqaaleeyaha ama maamulaha HR. Marka iska hubi in CV-gaagu yahay mid fiican ka hor intaadan u dirin waaxda HR.
Dadka ugu muhiimsan ee ah raadinta shaqooyinka Dubai waa Indiya, Pakistani iyo Iraniyaanka. Waxaad hubsan kartaa in badankoodu ay si adag u shaqeeyaan si ay u helaan shaqo Bariga Dhexe. Shaqaalaha ajnabigaa intooda badani waxay eegayaan Dubai blogs ah talooyin shaqo raadinta. Oo iyagu waxay isticmaalayaan aqoonta si ay shaqo u helaan si aad uga dhaqso badan adiga.
2. Marna ku dar Macluumaad Dheeraad ah oo ku yaal Warqadda Lacagtaada
Maamuleyaasha kireysta ee Dubai iyo agaasimayaasha waaxda HR uma baahnid inaad wax ka aqriso khibrada doqonnimada shakhsi ahaaneed. In kasta oo aad ku guuldaraysatay ama aad ka heshay dugsiga sare boqorka guusha gaadhista.
Waa inaad meel dhigtaa sababta aad u dooneysid shaqadan. Waligaa ha qorin wax kusaabsan sababta ay kuugu fiicnaan laheyd. Sababta oo ah waxaad kujirtaa xaalad xun waxaadna raadineysaa caawimaad. Recruiters ee Dubai kaliya wax aad u necbahay.
Qodobka kale waa xaaladaada shaqsiyeed iyo qoyskaaga. Iyagu, dabcan, waa inay ahaadaan kuwo gaar kuu ah adiga. Sida resumeygaaga, maareeyaha shaqaaleeyuhu doonayo inuu ogaado waxaad shirkada u qaban karto.
Ku saabsan waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto?
Isku day inaad marwalba haysato warqaddaada daboolka inta badan diirada lagu saaray shaqadan. Hubso inaad tafaasiil kugu filan ka bixiso sababta aad ugu habboon tahay fulinta shaqada iyo istaahila wareysiga. Dhanka kale, hubi in shaqo-bixiyeyaashu ay kuu heli doonaan sidii qof qaali ah oo dibedda ka yimid.
Markasta qaado waqti ka hor intaadan soo dirin faahfaahintaada. Hubi sida loo qoro warqad cayiman oo loogu talagalay loo shaqeeye kasta. Haa, waan ognahay inay tahay hawl adag. Laakiin taasi waa sida kaliya ee shaqo looga helo Dubai. Had iyo jeer ku habboon shahaadooyinkaaga hel shaqo. Markaa shaqaaleeyaha wuu arki karaa sababta aad u tahay musharrax wanaagsan.
3. Waayo-aragnimo-u-qalmitaankaaga Shaqada
Hubso inaad isbarbar dhigto khibradaada ku saabsan shaqooyinka suurto galka ah. Raadinta shaqada waa geeddi dheer oo ka socda UAE. Marka, xaqiiqda, khibradaada waxay isbarbar dhig ku sameysaa shaqooyinka khadka tooska ah ee loo yaqaan 'online jobs' waxay ubaahantahay inay ahaato mid dhameystiran Hagaag, guud ahaan hadalka, waayo-aragnimadaadu waxay ubaahantahay inay udhawdahay mid kaamil ah magaalada Dubai. Sababta oo ah kumanaan dad ah ayaa ku nool Bariga Dhexe iyo Aasiya.
Maalin walbana waxay dirayaan CV u gaar ah shaqaleysiinta. Marka, isku day inaad yeelato waayo-aragnimo sida ugu dhow ee suuragalka ah. Hubso in khibradaadu ay isbarbar dhigeyso shaqada iyo adiga musharrax ahaan.
Waa wax aad muhiim u ah in la qaato waqtiga iyo dadaalkaba gaar ahaan meel mashquul ah sida Dubai. Iyo si tartiib tartiib ah u raadinta shaqooyinka oo u dhigma shahaadooyinkaaga sharaxaadda shaqada.
Adiga ayay kugu jirtaa inaad muujiso maamulaha shaqaaleynta sababta aad shaqada ugu fiicantahay. Ka tag mala-awaalka isla'egta.
4. U diyaargarow inaad shaqo ku qaadato hal daqiiqo ka dib wareysiga
Hagaag, qalad kale taas waxaad sameyn kartaa waa kaliya labiska aan habooneyn ee wareysi shaqo oo ku sugan Dubai. Dalkani, dabcan, waa waddan muslim ah, laakiin anshaxa ganacsigu si wanaagsan ayuu ugu shaqeeyaa waddankan.
Isku day inaadan ku xad gudbin habka wareysiga. Sababta oo ah taasi waxay ku dhaawici kartaa adiga oo u eg sida nacasnimo ah. Kahor waxaad martiqaad ka helaysaa kulan in la isku dayo in yar oo cilmi baaris ah lagu sameeyo shirkadda iyo deegaanka shaqada.
Ma weydiisan kartaa dadka kale fikrad daacad ah?
Ma taqaanaa qofkasta oo kamid ah ururka aad hada dalbatay ?. Haddii aadan isticmaalin Linkedin oo waydii dadka ka shaqeeya halkaas lambarka labiska. Marka, haddii aadan hubin faahfaahinta dadka kale u hel fikrad ahaan waa wax fudud oo wax ku ool ah. Weydii dadka kale waxa ay xiran yihiin maalin walba. Taasi waxay noqon doontaa waxa ugu horreeya maamulaha shaqaalaysiinta wuxuu ku ogaan doonaa Dubai.
5 oo ku dhehay Nidaamka Diidan ee Wareysiga Shaqo
Qodobka shanaad waa wax walba oo ku saabsan waxyaallaha wakhti ku habboon. Sida aad u codsatay resume iyo warqad dabooli. Qoraal ka yimid Dubai yeelan doonaan xoogaa fikrad ah oo ku saabsan cidda aad tahay iyo waxa aad nolosha u sameyso.
In ka badan 60% nooca xun ee faahfaahinta hadalka. Looma baahna in la yiraahdo, taasi waa ka fiican tahay in lagaa tago dayacaad la'aan faahfaahinta inta lagu guda jiro wareysiga shaqada. Tusaale ahaan, shaqsigaaga ama meheraddaada ayaa ku dhaca inta lagu guda jiro horumarka shaqada. Ama dhinaca kale, maxaad u haysay dhowr bilood farqigaaga waayo-aragnimadaada.
Maxaad u baahan tahay inaad diirada saarto?
Wareysiga waa inuu ahaadaa mid ku saabsan waxa aad u sameyn karto shirkadda haddii lagu siiyo shaqada. La wadaag xirfadaha iyo shahaadooyinka kaa dhiga qofka ugu fiican booska. Maxaad ku samayn lahayd Dubai?
Adigoo xoogga saaraya sameynta ciyaar inta u dhaxaysa naftaada iyo shaqo raadinta. Dhanka kale, odhaahda wax aad u badan ayaa kaa saari karta doorashada murashaxiinta ee shaqada.
6 Stop - Qalalaasaha Wareysiga ee UAE
Imaaraadka Carabta waa Jidka ka fiican mid kasta oo ka mid ah dalalka. Waxaana hubaal ah Dubai, Abu Dhabi ama Sharjah waxaad heli doontaa wareysi oo aan si fudud u shaqeynin.
Mararka qaar, looma jeedin inuu noqdo, iyo waayo-aragnimadaadu waa habka saxda ah ee shaqadan loo soo bandhigo. Xitaa haddii aad ku guuleysato inaad gudbiso wareysiga oo aadan ku darin Imaaraadka Carabta.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waraysiyo iyo khaladaad guud oo si fudud looga hor tagi karo. Tusaale ahaan, ha raagin, waligaa ha sugin soo wicitaan soo wicitaan. Waa sida ugu wanaagsan ee loo waco shaqaalaysiin kara oo wuxuu tusaa inaad shaqo rabto.
7 Hubi inaad Tixraac ka tiigsaneyso UAE
Mid ka mid ah kuwa ugu faahfaahinta muhiimka ah ee shaqo ka helista Dubai. Kaliya si sahal ah ayaan uga helaysaa tixraacyo ka socda hay'ad fadhigeedu yahay Dubai oo ku taal CV-gaaga. Had iyo jeer diyaar u noqo inaad bixiso faahfaahinta xiriirka markaad shaqo raadineyso.
Maamulayaasha Kheyraadka Dadku waxay eegayaan mid kasta oo ka mid ah.
Kiiska ugu xun ee aadan dooneynin inuu dhaco waa inaad hesho maamuleyaashaada daqiiqadii ugu dambeysay oo aad u sheegto inaad u baahan tahay inaad bixiso caddeyn sida ay u wanaagsan tahay iyo sida ugu xoogan ee aad u shaqeyn karto.
Marka hore, u yeer waaxdaada HR. Kadib samee liis tixraacyo diyaar ah oo la bixin karo laakiin kaliya waxaa laga keenay shirkadaha Imaaraadka Carabta. Maxaad ku samayn lahayd Dubai? Meel kuu dhigo ikhtiyaarkaaga fur oo waligaa ha gubin buundooyinka Marna ma ogaan kartid goorta aad u baahatid.
8 Waxay illowday in ay la socoto kaddib markay wareysi la yeelatay
Dhaqanka kale ee xun ayaa ah inaadan dabagelin waraysiga shaqada kadib. Xaaladaha qaarkood ayaa kaa caawin kara inaad shaqo hesho. Tusaale ahaan, waxay ku siin doontaa hal fursad oo dheeri ah oo aad ku xasuusiso iyo in aragti wanaagsan la sameeyo.
Kuwa ku shaqaaleeya Dubai sida in lagu qadariyo waqtigooda iyo dadaalkooda. Marka, si xariifnimo leh ayaa laguugu mahadceliyaa emayl ahaan maalin uun wareysiga ka dib. Xaqiiqdii waa hab wanaagsan oo lagu muujiyo mahadsanid waqtiga iyo fursadda aad u leedahay inaad maamusho.
Dabagalka ayaa waliba ku siinaya fursad kale oo mar labaad lagu daro qaar ka mid ah waxyaabo muhiim ah oo aad illowday. Tusaale ahaan, waxkastoo aad jeceshahay inaad sheegto inta lagu gudajiro wareysiga. Waxaad jeceshahay waaya aragnimadaada shirkadda xyz. Ama caddeyn dheeri ah Taasi waxay ka caawin kartaa iyaga inay go'aansadaan inay ku qaadaan doonta.
9 Ka Fogaanshaha Shaqadaada Dib-u-eegidaada
Intooda badan waxay ku baxaan Dubai. Uma maleynayaan jidka saxda ah. Hagaag, Maxaad ku samayn lahayd Dubai? In aan wax xun laga sheegin shirkadda markaad nooshahay.
Sababta oo ah waxay muhiim u tahay waxaad tiraahdid wadada looga baxo shirkada. Waana hubaal maareeyayaasha, weli waan ku xasuusanayaa. Marka, fekerka adiga kugu saabsan ayaa muhiim ah mustaqbalka fog.
Tusaale ahaan, kuwa shaqaaleysiinaya shaqaaluhu waxay caadiyan hubiyaan tixraacyada 3 ee ugu dambeysay ilaa loo shaqeeyaha 6. Marka, haddii aad ka tagtay shaqadaadii ugu dambeysay on note xun. Maamulayaasha halkaas ka yimi waxay odhan doonaan waxaad sameysay khayaano waxay ku soo noqon kartaa si ay dhib kuu geliso. Marka, isku day inaad adeegsato maskaxdaada oo aad ku hayso daraasadda shucuurta. Waxaa intaa dheer, waligaa ha u sheegin shirkadaadii hore taasi waxay ahayd qalad.
10 Maxaad ka qabanaysaa Dubai si aad u noolaato?
Had iyo jeer isku day inaad maskaxdaada ku hayso wadada saxda ah. Waligaa ha isku deyin inaad khayaanada sameyso. Sida ugu wanaagsan waa, inaad ahaato qof daacad ah, iyo si adag u shaqeynta si loo gaaro yoolalka. Dubia waa wadan aad u adag oo aan ogoleynin wax falal dambi ah. Intaa waxaa sii dheer, go'aan kasta oo xun ayaa dhibaato kaa gelin doona adiguna waad geli doontaa a xabsi ku yaal gudaha Dubai ama waa lagu masaafurin doonaa wadankaagii hooyo. Taasi waa dhab, waana ku quseyn doontaa adiga.
Awooda inaad ka sii fikirto awooda wax qabad…
Socdaalka wareega ayaa Ka dhig shaqadaada aad ku riyootay!
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, Hindida iyo Baakistaan ​​oo isku dayaya inay shaqo ka helaan Imaaraadka. Marka, iyada oo tartan maalinle ah oo adag, hawlahan ay umuuqdaan wax aan macquul aheyn. Laakiin dhab ahaan, waa eray uun.
Marka, hel naftaada iyo dhigay dhowr wareysiyo shaqooyin isla goobta ah. Hadda waad ogtahay waxa aadan ku qaban karin Dubia. Hadda waa wakhti aad ku ugaadhsanaysid shaqo raadintaada qorshe ficil. CV-ga iyo warqadda daboolka waa in la caddeeyaa oo si wanaagsan loo qoraa.
Sidee loo sameystaa wareysiga? Qabo uun!
Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo ajnabi ah, xataa macalimiin khibrad fiican leh laga bilaabo Koonfur Afrika iyo Filibiin. Mararka qaar way ku adagtahay in la helo wareysi habboon oo ku saabsan ganacsi weyn oo dhexdhexaad ah.
Waxaad ubaahan tahay si looga fogaado noocyada khaladaadka Dubai. Sababtoo ah waxay yareyn doonaan fursadahaaga inaad runtii hesho ikhtiyaar aad ku heli karto boos shaqo. Xaqiiqdiina hoos u dhig fursaddaada ah inaad goolashaas dhaliso shaqo gaar ah oo maareyn shaqo.
Waxaan mar walba isku deyeynaa inaan hubino shaqo raadiye ka socda dibadda. Taasi oo ah isla xeerarka codsanaya qof kasta oo ku nool Dubai. Bariga Dhexe waa hubaal waa meel weyn oo sugeysa mustaqbalkaaga.
Sidaas, haddaad raacdo UAE sharciyo u qalma. Waa inaad shaqo ka hesho Dubai ama Abu Dhabi. Had iyo jeerna iskuday inaad sameyso shaqada riyadaada, run. Si kastoo xun u eg yahay. Isku day inaad ka fogaato sunta. Oo la dirir neefta ugu dambeysa.
Xeeladahee ayuu u adeegsanayaa arday cusub oo qalinjebiyey?
Xagga ugu xumaa waa ardayda cusub ee qalanjabiyey oo leh khibrad MBA ah. Macno malahan macno sababta dhamaan ardayda yar yar aysan u heli doonin fursad shaqo ka hesho Dubai.
Kuwa shaqo doonka ah ee ugu da'da yar ayaa isku dayi doona inay gaystaan ​​deyntaas weyn kadib markay shaqeeyaan ka qalin jabiyay jaamacad. Oo waa la iskaga tegi doonaa keligood. Marka, run ahaantii, waxay u baahan yihiin inay lacag badan ka sameystaan.
Sida qof ku cusub suuqa shaqada ee Dubai. Waxaad u baahan tahay inaad hooseyso, joojiso fekerkaaga inaad tahay qof aqoon leh. Waxaad ubaahantahay inaad si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqdid shirkad caalami ah. Laga soo bilaabo halkaas - ma jirto wax ka reeban. Qofkastaba haku xirnaadee waxbarashadooda maaree inaad sameyso si aad shaqo uga hesho Dubai.
Maxay taatikada u isticmaalaan sida a Maamulaha Dubai?
Dad khibrad leh oo khibrad badan leh. Laakiin dalka Isutagga Imaaraatka carabta, waxaa jira adduunyo afka iyo isku xirnaanta ah oo qodobo dhowr ah kuu oggolaanaya si aad shaqo ugu hesho heer maamul.
Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso inay tahay caddaalad darro sida aad u dhaqanto. Laakiin shirkaddaada ma siin lahayd shirkadda qofka aanad aqoonin? Sidaas daraadeed, Dubai waa meel fiican laakiin waxaa jira sharci ah in aad raacdo. Haddii aad shaqaaleysid qof khalad ah oo uu khalad sameeyo.
Nasiib darrose, waa khalad maalgeliyayaal iyo sharci ahaan isaga ayaa mas'uul ka ah inuu hagaajiyo arrintaas. Iyo kiisaska badankood oo qaadanaya walaac badan iyo lacag aad u badan dabcan bilo yar gudahood.
Gunaanad - Maxaad ka qabanaysaa Dubai?
Raadinta Xirfadaha Dubai waxay u baahan tahay dulqaad iyo samir. Sidaa darteed, guud ahaan ku hadla, qof walbaa kuma barakicin karo helitaanka shaqada a magaalada smart. Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay talooyin dhowr ah Shirkadda Dubai City. Oo waxaad u adeegsan doontaa iyaga si loo gaaro riyadaada shaqo ee Dubia.
Had iyo jeer casriyee Manhajkaaga Vitae. Markaa hayso waraaqdaada daboolida si gaar ah oo loogu talagalay shaqo helis. U dir CV si joogto ah iyo hubi khibradaha xayeysiinta shaqada ka hor intaadan CV u dirin loo shaqeeyaha mustaqbalka.
Hagaag, kahor intaan dadku khiyaameyn CV-ga. Laakiin waqtiyadaas ayaa soo afjaraya. Hadda baaritaan sahlan oo asalka ah ayaa la sameeyaa iyadoo ku dhawaad ​​midwalba fulinta. Marka, haddii ay hubiyaan inay waxyeello ka badan tii hore u fiicnaaneyso. Magaalada Dubia, waxaa jira xariiq khafiif ah adoo daacad ah.
Maxaad samaynaysaa si aad shaqo uga hesho UAE?
Kahor Intaadan Aadin!
Waxa ay aheyd inaad sameyso kahor intaadan aadin !. Hoos ka deg Liiska fursadaha shaqooyinka oo mid mid u codso. Shaqooyinka fiican waa inaad codsataa kaliya goobaha shaqada sharciga ah.
Hubi la-taliyeyaasha khiyaamada oo aqoon fiican u leh shirkadda ka wakiil ah. Xiriirrada muhiimka ah ama tixraacyada ayaa ciyaara door muhiim ah helitaanka shaqooyinka. Kala xiriir khadka tooska ah iyo munaasabadaha rasmiga ah fursado shaqo oo dheeri ah.
Marka, tag bogga internetka oo ku dar cinwaanka websaydhka. Waxaad kaheleysaa shirkadahan adag tahay in la baadho online. Waa inaadan tixgelin inaad siiso mid ka mid ah shaqaaleysiintaan. Qaarkood way awoodaan kaa caawinayaan inaad shaqooyin hesho adiga oo adiga ku matalaya. Laakiin nasiib wanaag, badankood waa uun shirkadaha khiyaanooyinka.
Tixgeli dhammaan wixii kor ku xusan!
Dubia iyo shaqo raadinta waa iska cad in ay adagtahay in la maareeyo. Caqabado badan iyo kumanaan, dabcan, si aad u hesho shaqadaada riyada laga yaabee inaysan xitaa u qalmin dhamaadka.
Waxaad heli doontaa shaqooyin oo leh xirfado aasaasi ah sida fursadaha salka adeegga macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, helitaanka booska riyadaada ayaa laga yaabaa inaysan suurta gal ahayn bilowga Dubai. Marka, isku day inaad hesho shaqo kasta oo bilow ah oo tartiib tartiib ugu soco heer shirkadeed. Marka, Maxaad samayn lahayd Dubai? Xaqiiji inaad dameerkaaga u dhaqaaqdo marxaladda xigta. Shaqo adag oo shaqo raadin iyo anshax shaqo. Jooji isagoo ku riyoonaya shaqooyinka riyada Carabiga.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa tilmaamo wanaagsan shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Shaqooyinka ku yaala Dubai. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.